Dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi oo hoos u dhacay
Daraasad uu sameeyay bankiga dhexe Kuuriyada Koofureed ayaa maanta lagu sheegay in dhaqaalaha dalka Kuuriyada Waqooyi uu sannadki hore hoos ugu dhacay boqolkiiba 3.5, sababo la xiriira cunaqabteynta ay Qaramada Midoobay saartay darteed.
Hoos u dhacani dhaqaale ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ay xukuumadda Pyongyang la kulanto muddo 20 sano ah, waxana uu caksi ku yahay kobocii dhaqaale ee sannadki 2016-ki uu dalkaasi sameeyay oo aheyd 3.9 boqolkiiba.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay Kuuriyada Waqooyi oo faah-faahinaya hoos u dhacan dhaqaale.
Hoos u dhicii ugu xumaa ee dhaqaale ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ahaa kii sannadkii 1997-ki markaas oo dalkaasi ay ka dhacday abaar daran. Wuxuu markaas kororka dhaqaalaha dalkaasi uu hoos uga dhacay 6.5.